Ama-Dow Chemical Archives - I-US Ilungelo Lokwazi
“Ngicabanga ukuthi amazinga asethwe njengamanje aphephile? Mhlawumbe akunjalo, ”kusho uBirnbaum. "Sinabantu abanobungozi obuhlukile, kungaba ngenxa yofuzo lwabo, noma iminyaka yabo, noma yini engabenza bathambekele kakhulu kulezi zinto," esho.
UTamar Haspel yintatheli ezimele ebilokhu ibhala amakholomu okudla nyangazonke eWashington Post kusukela ngo-Okthoba 2013. Amakholomu akhe avame ukukhuthaza futhi avikele imikhiqizo yomkhakha wezibulala-zinambuzane, kuyilapho ethola izinkokhelo zokukhuluma emicimbini ehambisana nemboni, futhi kwesinye isikhathi evela emaqenjini ezimboni. Lo mkhuba wezintatheli othola izinkokhelo ezivela emaqenjini ezimboni, aziwa ngokuthi "yi-buckraking," uvusa imibuzo mayelana nokuhlunga.
Ukubuyekezwa kwamakholomu eHaspel eWashington Post kuphakamisa okunye ukukhathazeka. Ezimweni eziningi, uHaspel wehlulekile ukudalula noma achaze ngokuphelele ukuxhumana kwemithombo yakhe yemithombo, wathembela ezifundweni ezigxilwe embonini, amaqiniso athathwe ngamakhompiyutha ukusekela izikhundla zomkhakha, noma wacaphuna inkulumo-ze yezimboni ngokungafanele. Bona isibuyekezo sethu somthombo ukuthola imibhalo. UHaspel ubengakaphenduli emibuzweni yale ndatshana.
Ukuxhaswa kwezimali kwezolimo kungqubuzana kwezintshisekelo
"Ngikhuluma futhi ngilinganise amaphaneli nezimpikiswano njalo, futhi ngumsebenzi engikhokhelwa wona," kusho uHaspel wabhala engxoxweni online online 2015 isingathwe yiWashington Post, ephendula umbuzo wokuthi ngabe uyayithola yini imali emithonjeni yezimboni. UHaspel uthe udalula ukuxhumana kwakhe naye iwebhusayithi yomuntu siqu, kepha akadaluli ukuthi yiziphi izinkampani noma amaqembu amxhasayo, noma ukuthi anikela malini.
Umhleli kaHaspel uJoe Yonan usho kanje unethezekile ngendlela uHaspel asebenza ngayo ekukhulumisaneni okukhokhelwayo futhi uthola ukuthi "kuyisilinganiso esifanelekile."
Ukubheja kwi-Food Beat: Kunini lapho kungqubuzana Kwezintshisekelo? nguStacy Malkan, Fairness and Accuracy in Reporting (2015)
Umbiko omfushane ngezintatheli ezintathu okukhulunywe ngazo kwizicelo zethu ze-FOIA, nguGary Ruskin, US Right to Know (2015).
Ngemibono evela kuzintatheli nabahleli nge-buckraking, bheka Ukubika kukaKen Silverstein kuHarper's (2008).
UHaspel waqala ukubhala ngokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo ku- Mashi 2013 ku-Huffington Post ("Iya eFrankenfish! Kungani Sidinga i-GM Salmon"). Okokugcina uchungechunge lwezihloko zeHuffington Post kugxilwe kahle kwimikhiqizo yezimboni yezolimo. Wazikhipha izingcuphe ze glyphosate futhi Ukudla kwezilwane kwe-GMO, kuphikisana ngokumelene nelebula le-GMO imikhankaso, futhi wakhuthaza imboni yezibulala-zinambuzane exhaswa ngemali iwebhusayithi Izimpendulo ze-GMO. Lelo sayithi lalikhona ingxenye yedola lezigidi eziningi Isinyathelo sobudlelwano bomphakathi sokulwa nokukhathazeka kwabathengi ngokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo ngemuva kwemikhankaso yokuqamba ama-GMO amagama.
UHaspel wethule ikholomu yakhe yokudla “evundululiwe” yanyanga zonke eWashington Post kungekudala ngemuva kwalokho, ngo-Okthoba 2013, ngendatshana ekhuluma “yini eyiqiniso”Mayelana nama-GMO. Uthembise ukuthi “uzomba ajule ukuzama ukuthola ukuthi yini eyiqiniso nokuthi yini engekho engxoxweni mayelana nokutholakala kokudla kwethu.” Weluleke abafundi ukuthi babheke ukuthi “ungamethemba ngubani” empikiswaneni ye-GMO futhi wakhomba amaqembu amaningi angazange aluphumelele uhlolo lwakhe lokungakhethi; i-Union of Concerned Scientists ibiphakathi kwabo.
Ikholamu elandelayo kaHaspel, “GMO indawo evamile: Lapho abasekeli nabaphikisi bevumelana khona, ”kunikeze imibono ebanzi evela kuzintshisekelo zomphakathi kanye nasemithonjeni yezimboni. Kodwa-ke, kumakholomu alandelayo, uHaspel wayeqabukela ecaphuna amaqembu ezithakazelo zomphakathi futhi anikeze isikhala esincane kakhulu emithonjeni yezempilo yomphakathi kunemithombo exhunywe embonini. Uvame ukucaphuna ochwepheshe "ekuboneni ubungozi" abavame ukubukela phansi ukukhathazeka kwezempilo yomphakathi nokuphepha. Ezimweni eziningana, iHaspel yehlulekile ukudalula noma uchaze ngokuphelele ukuxhumana kwezezimboni nemithombo lapho ubika ngama-GMO, izibulala-zinambuzane noma ukudla okuphilayo.
Isibonelo esikhombisa izinkinga zokukhetha yiHaspel January 2016 ikholomu, "Iqiniso elimangazayo ngokuhamba kokudla." Uthi abantu abakhathalele ubunjiniyela bezakhi zofuzo noma ezinye izici zokukhiqizwa kokudla - "ukunyakaza kokudla" - bayingxenye engezansi yabantu. Akahlanganisanga nezingxoxo nabathengi, ezempilo, ezemvelo noma amaqembu ezobulungiswa azithatha njengengxenye yokunyakaza kokudla.
IHaspel ithole ikholamu ngamaqembu amabili wespin axhaswe ngemali embonini, i- Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke futhi UKetchum, inkampani yezobudlelwano bomphakathi eqhuba iwebhusayithi exhaswa ngemali yimboni yezibulala-zinambuzane iGMO Answers. Ngenkathi echaza uKetchum njengenkampani ye-PR "esebenza kakhulu nemboni yokudla," uHaspel akazange adalule imvelaphi: ukuthi uKetchum waqashwa yinhlangano yezohwebo ukushintsha imibono yabathengi ngokudla kwe-GMO. Uphinde wakhuluma ngomlando wehlazo likaKetchum i-flacking yeRussia futhi eqhuba izinhloli ngokumelene namaqembu ezemvelo.
Umthombo wesithathu wekholomu yakhe kwakuyinhlolovo yocingo eneminyaka emibili eyenziwe UWilliam Hallman, umhlaziyi wombono womphakathi ovela kuRutgers obike ukuthi abantu abaningi abanendaba nokubekwa ilebula kwe-GMO. Ngonyaka owedlule, uHallman noHaspel babevele ndawonye kuxhaswe nguhulumeni iphaneli yokuxoxa ngama-GMO no-Eric Sachs waseMonsanto.
Ukusondelana kukaTamar Haspel, nokusebenzisana kwakhe, nabadlali ababalulekile emizamweni yezobudlelwano nomphakathi embonini yezolimo kuphakamisa okunye ukukhathazeka mayelana nenhloso yakhe.
Isilinganiso sokukhangisa esingenhla ivela ekhasini eliyisiqalo le-STATS / Sense About Science, ichaza ama-STAT "njengabaluleke" ekubikeni kwakhe. Ezinye izintatheli zichaze ama-STATS njenge- umkhankaso wokuvikela umkhiqizo “umkhankaso wokwaziswa okungaziwa”Lokho kusebenzisa amaqhinga kagwayi okukhiqiza ukungabaza ngobungozi bamakhemikhali. Ama-STAT adlale indima enkulu “kwezepolitiki ze-hardball zokulawulwa kwamakhemikhali” kanye nemizamo yomkhakha yokuhlambalaza ukukhathazeka kwezempilo nge-bisphenol-A, ngokusho kwe- kubika eMilwaukee Journal Sentinel.
A 2016 Indaba ku-The Intercept ichaze izibopho zikagwayi ze-STATS ne-Sense About Science, ezihlangane ngo-2014, kanye nendima la maqembu ayidlalayo ekuphusheni imibono yezimboni ngesayensi. Ubudlelwano bomphakathi ngo-2015 idokhumenti yamasu waqamba igama elithi Sense About Science phakathi kwe- “abalingani bemboni ”UMonsanto uhlele ukuzibandakanya emkhankasweni wayo "wokulungisa ukukhala" ngokumelene ne-ejensi yocwaningo lomdlavuza yeWorld Health Organisation ukudicilela phansi umbiko mayelana ne-carcinogenicity ye-glyphosate.
NgoJuni 2014, iHaspel yayiyi- Ilungu le "faculty" emcimbini wokuqeqeshwa kwemiyalezo oxhaswe imboni yezibulala-zinambuzane obizwa nge- Ikamu Le-Boot Biotech Literacy Project. Lo mcimbi ubuhlelwe yi Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, amaqembu amabili angaphambili embonini iMonsanto nayo ekhonjwe "njengabalingani bemboni" kuyo Uhlelo lwe-2015 PR.
Izingqungquthela zezinkomfa zemiyalezo ye-biotech
NgoMeyi 2015, uHaspel wethule inkulumo ethi “usuku lwe-biotechnology literacy kanye nezokuxhumana”ENyuvesi yaseFlorida. Lo mcimbi uhlelwe nguKevin Folta, ongusolwazi ohlangene nemboni yezolimo ezimayelana Nomphakathi futhi imizamo yokunxenxa. UFolta wayefake neHaspel kufayela le- Isiphakamiso wasithumela eMonsanto efuna ukuxhaswa ngezimali emicimbini ayichaze “njengesixazululo senkinga yezokuxhumana nge-biotech.” Le nkinga, kusho uFolta, ibingenxa yokuthi izishoshovu "zilawula umbono womphakathi" kanye "namandla abo amakhulu okuzama ukubamba ukudla ngokungadingekile." Ekhasini 4, UFolta uchaziwe umcimbi obekuzoba nawo osolwazi be-UF kanye "nabamele imboni, ochwepheshe bezintatheli kwezokuxhumana kwezesayensi (isib. UTamar Haskel [sic], u-Amy Harmon), kanye nochwepheshe ekuboneni ubungozi bomphakathi kanye ne-psychology (isib. uDan Kahan)."
Monsanto uxhase isiphakamiso, bakubiza ngokuthi “indlela enhle evela eceleni yokuthuthukisa uhlobo lokukhuthaza esifuna ukuluthuthukisa.” (Imali kamuva ezanikelwa endaweni yokudla ngemuva kokuthi umthombo woxhaso ubonakale emphakathini.)
Imibuzo yokuziphatha nokuziphendulela
Kuncike emithonjeni exhunywe embonini; yehlulekile ukudalula ubudlelwane bemboni
Embikweni wakhe we-2018 "weqiniso mayelana nomkhiqizo wemvelo kanye ne-pesticides," uHaspel unikeze abafundi "umbono wobungozi obukhulu" kusuka ekuvezweni kwezibulala-zinambuzane okwandayo ngokucaphuna isifundo lokho kulinganisa ubungozi bokudla izibulala-zinambuzane kusuka ekudleni kuya ewayinini yokuphuza. UHaspel akazange adalule ukuthi ababhali abane kwabahlanu balolu cwaningo babeqashwe yiBayer Crop Sciences, engomunye wabakhiqizi abakhulu bezibulala-zinambuzane emhlabeni.
Akazange futhi azise abafundi bakhe ukuthi ucwaningo lokuqala lwalunephutha elikhanyayo elalilungiswa kamuva (yize ikholomu yakhe yayixhunywe kocwaningo lokuqala nolungisiwe). Ucwaningo luqale lalinganisa ukuvezwa kwezibulala-zinambuzane ekudleni njengokulingana nokuphuza ingilazi eyodwa yewayini njalo eminyakeni eyisikhombisa. Ababhali kamuva bakulungisa lokho engilazini eyodwa yewayini njalo ezinyangeni ezintathu. Lokho kwakungelinye lamaphutha amaningi ephepheni, ngokusho kwe- incwadi eya kulo magazini kososayensi abachaze lolu cwaningo “njengolulula ngokweqile noludukisa kakhulu.”
Ukuchitha ukukhathazeka ngemiphumela yokuhlangana kokuchayeka kwizibulala-zinambuzane eziningi, uHaspel ucaphune enye cwaningo kusuka kumbhali okuyiwona kuphela onxusa i-Bayer wesifundo esinamaphutha sokuqhathanisa iwayini. Futhi ubalule “a Umbiko we-2008”Lokho“ kwenza ukuhlolwa okufanayo. ” Ababhali balowo mbiko wango-2008 bahlanganisa u-Alan Boobis no-Angelo Moretto, izifundiswa ezimbili ezabanjwa ku ukungqubuzana kwehlazo lenzalo ngo-2016 ngoba babe ngusihlalo wephaneli le-UN elakhipha i-glyphosate engcupheni yomdlavuza ngasikhathi sinye njengoba babephethe izikhundla zobuholi e I-International Life Sciences Institute, iqembu elingenzi nzuzo elithole okukhulu iminikelo evela embonini yezibulala-zinambuzane.
Kwikholamu yakhe yango-2015 emayelana nobungozi be-glyphosate, “ikhemikhali iMonsanto incike kuyo,” uHaspel ucaphune imithombo emibili enokuxhumana komkhakha wezibulala-zinambuzane angazange akudalule. Imithombo kwakunguKeith Solomon, isazi sezobuthi esabhala amaphepha nge-glyphosate ayekhona ixhaswe nguMonsanto (futhi ngubani uMonsanto ukukhuthaza njengomthombo); noDavid Ropeik, umxhumanisi wokubona ngobungozi onenkampani yePR amaklayenti afaka iDow, iDuPont neBayer.
Kwikholamu yakhe yango-2014 mayelana nokuthi izinsalela zezibulala-zinambuzane ekudleni zibeka engcupheni yini ezempilo, uHaspel wethule ukungabaza ngezingozi zezempilo ze-organophosphates, isigaba semithi yokubulala izinambuzane exhumene ukulimala kwemizwa ezinganeni. Ubalule i- ukubuyekeza ethola ukuthi "izifundo ze-epidemiological azizange zithinte ngokuqinile noma imuphi umuthi wokubulala izinambuzane njengoba uhlobene kakhulu nemiphumela emibi yokukhula kwezinzwa ezinganeni nasezinganeni." Umbhali oholayo wayengu- UCarol Burns, usosayensi eDow Chemical Company, ongomunye wabakhiqizi abakhulu be-organophosphates ezweni; ukuxhumeka akuzange kudalulwe.
Leyo kholamu iphinde yasebenzisa imboni eya kusosayensi wezobuthi uCarl Winter njengomthombo wokuqinisekisa ukuphepha kwezinsalela ze-pesticis ekudleni, ngokususelwa ekuhloleni ubungozi be-EPA. IMonsanto yayikhona ukugqugquzela umsebenzi kaBusika ngaleso sikhathi ezindaweni zokukhuluma, kanti uBusika naye wakhonza kwi ibhodi lokweluleka ngesayensi weqembu elixhaswe ngemali yiMonsanto Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, okuyinto ngiziqhayisa kokuthunyelwe kwebhulogi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule mayelana nokushicilelwa kwe-anti-organic okwakucaphuna umfana wabo, "umeluleki we-ACSH uDkt. Carl Winter."
Kwikholamu yakhe yango-2014 ephathelene nokudla okuphilayo, uHaspel wasebenzisa iphepha lowe-2012 yi-American Academy of Pediatrics ngaphandle komongo ukuqinisa impikiswano yakhe yokuthi ukudla i-organic kungahle kunganikeli izinzuzo zezempilo, futhi akabazisanga abafundi ngobubanzi obugcwele bocwaningo noma iziphetho. I- Iphepha le-AAP ibike ubufakazi obuhlukahlukene besayensi obuphakamisa ukulimala ezinganeni kusuka kokuchayeka okunamandla nokuhlala njalo kumithi yokubulala izinambuzane ehlukahlukene. Kuphethe ngokuthi, "Ukuchayeka kwezingane emithini yokubulala izinambuzane kufanele kulinganiselwe ngangokunokwenzeka." Lo mbiko ucaphune ubufakazi bokuthi “kwehle ngokushesha okukhulu ekukhishweni komchamo kwama-metabolites ezibulala-zinambuzane” ezinganeni ezidla ukudla okungokwemvelo. I-AAP nayo ikhishiwe izincomo zenqubomgomo ukunciphisa ukutholakala kwezingane emithini yokubulala izinambuzane.
Kwikholamu yakhe yango-2018 emayelana nomkhiqizo ophilayo, uHaspel ngokudukisa wabika ukuthi i-pesticide chlorpyrifos "kube yimpi phakathi kwamaqembu ezemvelo, afuna ukuthi ivinjelwe, ne-EPA, engafuni" - kepha akabazisanga abafundi ngesihluthulelo iphuzu: ukuthi i-EPA wayencome ukuvinjelwa i-chlorpyrifos ngenxa yobufakazi obandayo bokuthi ukutholakala kokubeletha kungahle kwenzeke ube nemiphumela ehlala njalo ebuchosheni bezingane. I-ejensi ihlehlise inkambo kuphela ngemuva kwe- UTrump EPA waphazamisa.
UHaspel uthole indlela yakhe yokudukisa "amaqembu ezemvelo vs EPA" ngesixhumanisi seNew York Times ikhasi lemibhalo lokho akuhlinzekanga umongo ngesinqumo se-EPA, kunokuxhumanisa nendaba ye-NYT ebike ngayo ithonya lebhizinisi ngemuva kwesinqumo se-EPA ukuvumela i-chlorpyrifos.
Kwikholamu yakhe ka-2018, uHaspel usungule impikiswano yakhe yokuthi ukuvezwa kwezibulala-zinambuzane ekudleni akukhathazi kakhulu isu lokuzibika elingathandeki alisebenzisile kwezinye izikhathi: ecacisa isivumelwano phakathi kwemithombo eminingi engaziwa.
Kulokhu, uHaspel ubike ukuthi amazinga ezibulala-zinambuzane ekudleni “aphansi kakhulu” futhi “akufanele ukhathazeke ngawo,” ngokusho kwezinhlangano zikahulumeni wase-US “(kanye nezazi eziningi ezinobuthi engikhulume nazo eminyakeni edlule).” Yize ebike ukuthi "akuwona wonke umuntu onokholo" kulezo zivivinyo zikahulumeni, uHaspel akazange asho lutho ngemithombo engavumelani futhi wakushaya indiva ngokuphelele lokho Umbiko we-American Academy of Pediatrics lokho kuncoma ukwehliswa kokuchayeka kwezingane emithini yokubulala izinambuzane, akubalule ngokungahambisani nekholamu yakhe yango-2014. Kwikholamu yakhe yango-2015 ekhuluma nge-glyphosate, waphinda futhi wacaphuna imithombo enomqondo ofanayo, ebika ukuthi usosayensi “ngamunye” akhulume naye wathi, kuze kuphakame imibuzo yakamuva, "i-glyphosate ibiphawuliwe ngokuphepha kwayo."
UHaspel uphuthelwe yinqwaba yemininingwane efanele ekubikeni kwakhe ngokuthi “finyelela ezansi kwako” ebika ngobungozi bemithi yokubulala izinambuzane nezinzuzo zezinto eziphilayo. Izitatimende zakamuva zamaqembu ezempilo avelele nesayensi ayilahlekile zifaka:
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, ACSH, U-Alan Boobis, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, U-Amy Harmon, Angelo Moretto, Bayer, I-Bayer Crop Sciences, Kwenziwe kabusha, ikamu lokufundela ukufunda nge-biotech, Iphrojekthi Ye-Biotech Literacy, UCami Ryan, UCarl Winter, UCarol Burns, UCathleen Enright, Isikhungo Sobuqotho Bokudla, CFI, chlorpyrifos, UDan Kahan, UDavid Ropeik, IDow Chemical, Dupont, U-Eric Sachs, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, glyphosate, Izimpendulo ze-GMO, IFIC, Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke, UJoe Yonan, UKeith Solomon, UKetchum, UKevin Folta, Monsanto, INational Press Foundation, Rutgers, Umuzwa Ngezesayensi, IZIBALO, Syngenta, UTamar Haspel, UTrevor Butterworth, Trump EPA, Inyuvesi yaseCalifornia eDavis, University of Florida, UVance Crowe, Washington Post, UWilliam Hallman